Ekugqibeleni ubuya kwi-Manifold course-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2008 Ukufundisa i-CAD / GIS, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Le veki liye nzima, emva lweengcali elihle owayehlala projekthi ngaphezu konyaka Ndayeka, kwafuneka enze iisemina ukuba uza kusihlangula kwi eziphindaphindiweyo ukusetyenziswa kamasipala. Ngexesha elifanayo ndifanele ndilungiselele abaqeqeshi abatsha abatshintshwayo.
Iworkshop yokuqala yahlaziywa yi-Microstation kwiiveki ezidlulileyo, nangona zibandakanya ukubonisa ezinye iifomenti kunye ne-AutoCAD; Kule veki kuye kwaba nguqulelo lokulungiselela kwedatha kwi-Microstation Geographics ukuba ingeniswe yiNkqubo zeMpawu.
Abafundi be-10, umlawuli we-1, umqeqeshi we-2 umqeqeshi, iintsuku zokuqeqesha ze-4. Ekubeni isithuthi hotel isiphekepheke yaba Project kwaye malhumoré nam kuba abanye zange azalisekise imisebenzi kwisemina yangaphambili iintsuku ezimbalwa endayishiya 8 ebusuku ... ngoko ke luncedo.
Iiyure ze-6, ingcali, i-1.12 mts pixel kwindawo ye-rustic. Sisebenzise Yenza iMaphu ukukhuphela kwiGoogle Earth yonke umfanekiso wesisombululo esiphezulu soomasipala be10 ababandakanyekayo ...
Iiyure ze-3, i-technician, ii-34 zokulawula. Georeferencing umfanekiso okhutshwe nge-Microstation Descartes, kamva sidibanise kwaye sinqumle kumacandelo anomdla ngumasipala ...
Iiyure ze-2, iisenisi ze-10 zisebenze, ochwepheshe be-3. Kwakudingeka sithathe iCpu'sa Cybercafé ukuxhuma kwi-intanethi kwaye kusebenze iilayisenisi ye-GIS eneenkcukacha ...
Le ndawo inkqubo distribution amandla iintwala ubuncinane amaxesha 4 ngosuku amandla waphuma kwaye nangona ndawo isityalo amandla bonke matshini babe ibhetri ... inzuzo MicroStation na Ukulondoloza kodwa Manifolds phezu nayiphi walahlekelwa 40 imizuzu yomsebenzi ongasindisi rhoqo.
Le khosi yaye ijolise ekwakheni data, ngesiphumo workshop sele ekudaleni iimephu iindlela kunye zamanzi ekufuneka wenziwe ngokusebenzisa 1 sheet map: 50,000 kumagama ndawo kunye nomfanekiso elayishelwe ezantsi ukuzoba zombini ezitalatweni, imilambo kunye phukile Sazakhela nge-Microstation Geographics, ngoko senza ucoceko lwentando kwaye uqhagamshelwano lweendawo; ekugqibeleni athunyelwa ngaphandle "ifowuni ifowuni"ngamanqanaba ahlukeneyo kunye nokuguqulwa kwe-v8 ukuya kwi-v7 ngenguqu yokuguqula i-batch ... amava enkolo njengo-Enrique Iglesias athetha.
Ikhosi elandelayo iiveki ezintathu, xa sithemba ukwakha i-topographic, i-cadastral kunye noqweqwe lomhlaba. Kwakhona ukusetyenziswa kohlalutyo kunye nokuphathwa kwedatha ngeMpawu.
Ekugqibeleni, ikota yokugqibela iya kubandakanya ulawulo, inkcazo kunye nemifanekiso yoluhlu apho ikhosi kufuneka iqulethe khona ukupapashwa kweenkonzo ze-IMS, ukuveliswa kwezinto zokuvelisa kunye nokuchithwa kwedatha kunye neGvSIG, i-AutoCAD Imephu kunye ne-Bentley Imephu.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukulungelelwa kwi seminar ye-GvSIG
Post Next Ukungenisa kwiimephu ze-shp ukuya kwi-MicrostationOkulandelayo "
Enye Impendulo "Ekugqibeleni ubuye kwiCandelo leMpawu"
Imbonakalo enhle Ndiyakhumbula ukuqeqeshwa ndifumana ... into embi kukuba abazange bamenyibize kwakhona ...